Frankofonia 2016 34 ireo Filoha sy lehiben�ny Governemanta andrasana
Andron’ny Parlemantera tetsy Anosikely Nikorontana tanteraka
Samy manana ny fomba fiheviny sy fiasany tokoa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eto amintsika. Raha nanatanteraka ny « Journée des Parlemantaires » tetsy amin’ny Lapan’Anosikely omaly alakamisy 14 desambra ireo senatera sy solombavambahoakan’i Madagasikara manatanteraka ny fivoriana ara-potoanany avy ankehitriny ka nandinika niaraka ny lohahevitra
Fitondrana HVM Te hifehy mafy ny serasera
Mazava tsara ny tenin’ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason omaly fa ny fitsarana no hanapa-kevitra farany momba ny
AREMA –Fifidianana 2018 I Deba ihany no ho kandida ?
Tao anatin’ny lanonana tsotra dia tsotra famaranana ny taom-piasana ho an’ny taona 2017 notarihan’ny sekretera nasionaliny,
Solonandrasana sy Jean Max R Manahiran-tsaina ny filoham-pirenena
Raikitra ny fifanolanana sy ny fifandrahonana any an-dapa amin’izao fotoana. Antony ny fikatsahan’ny HVM handamina ny kajy politikany amin’ny alalan’ny fanoloana tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena.
Kandidà ben’ny tanàna lasa mpanolotsaina Manakorontana fotsiny
Tonga saina tampoka ve sa tena efa nisaina ela izany tokoa ny praiminisitra sady minisitry ny atitany,
Fanambin-dRavalomanana “Hiasa avo 10 heny noho ny efa vitako aho”
Tsy mila resabe isika fa mila asa, hoy ny filoham-pirenena teo aloha no sady filohan’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana omaly raha nandray fitenenana nandritry ny fankalazana ny faha 68 taona nahaterahany tetsy amin’ny Magro Tanjombato.
Kabarin’i Marc Ravalomanana teny amin’ny Magro Tanjombato Hoy izy ireo :
Rakotomandimby Jean Pierre (Ben’ny tanànan’i Soanindrariny Antsirabe II) “Tena ilain’ny firenena ireny tenin’ny filoha Ravalomanana rehetra teo ireny ary hombako manana ny fitsipika tokony hitondrana ny firenena ka iainana miainga avy any ambony mipaka aty amin’ny vahoaka.
Hisokatra ofisialy amin�ny sabotsy 26 novambra 2016 izao ny fihaonana an-tampon�ny Frank�f�nia andiany faha-16, izay tanterahina eto Madagasikara ny 22 ka hatramin�ny 27 novambra 2016. Efa nanomboka ny talata teo ny fivoriana isan-tokony.
Filoham-pirenena sy lehiben’ny governemanta miisa 34 eo no andrasana amin’io fihaonambe io. Izy ireo no hanapaka ny fanambarana iraisana ho an’ity andiany faha-16 ity sy hamaritra izay firenena hampiantrano ny andiany faha-17 an’ny Frankôfônia. Ny efa azo antoka fa ho avy aloha dia ny filoha frantsay François Hollande, ity farany izay manana fandaharam-potoana hihaona amin’ireo teratany frantsay sy ireo mizaka ny zom-pirenena frantsay eny amin’ny tranon’ny masoivoho frantsay eny Ivandry, amin’ny alahady 27 novambra ho avy io. Efa eto an-toerana, hatry ny sabotsy 19 novambra, handray anjara amin’io koa ny Mpanjakan’i Maraoka, Mohammed VI. Ity farany izay tany Antsirabe omaly, nametraka ny vatofehizoron’ny asa fanorenana hotely sy toeram-piofanana arak’asa. Vadina filoham-pirenena miisa 11 ihany koa no ho avy, hiaraka amin’ny vadiny. Hisy rahateo fivoriana iraisan'ireo vadin’ny filoham-pirenana ireo hatao ao amin’ny hotely Paon d’or eny Antanetibe Ivato, ao anatin’izao Frankôfônia 2016 izao. Minisitry ny raharaham-bahiny miisa 37 eo ihany koa no eto, mandray anjara amin’ny fivorian’ny minisitra eo anivon’ny Frankôfônia hatry ny omaly, ary hitohy anio, fivoriana tarihin’ny lehiben’ny diplaomasia Malagasy, Atallah Béatrice hamolavola ny fehin-kevitra sy fanambarana haroso hankatoavin’ireo filoham-pirenena hivory manomboka ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Delegasiona manodidina ny 3 000 avy amin’ny firenena 78 no handray anjara amin’izao Frankôfônia 2016 eto Madagasikara izao. Efitrano miisa 3235 no efa voafandrika hitoeran’izy ireo. Fiarabe na bus miisa 71 sy minibus miisa 45 no hitatitra ireo mpizaika mivezivezy avy aty an-drenivohitra mihazo ny CCI Ivato toerana isian’ireo fivoriana samihafa, araka ny fanomezam-baovao nataon’ny Delege jeneralin’ny Frankôfônia, Rajaobelina Mamy.